के तपाई मुखमा घाउ आएर हैरान हुनहुन्छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय – ramechhapkhabar.com
के तपाई मुखमा घाउ आएर हैरान हुनहुन्छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
कतिपय मानिसहरु मुखमा घाउ आउने समस्याबाट ग्रसित बनेका हुन्छन् । मुखमा घाउ आउँदा खाना खान मात्र नभई बोल्नसम्म गाह्रो हुने गर्दछ ।
भिटामिन, खनिज पदार्थको कमीले पनि घाउ आउन सक्छ । तनावका बेला घाउ आउन सक्छ । तर यस्तो घाउ तनाव घटेपछि आफैं निको हुन्छ । केहीमा भने एचआइभी, यौनरोगजस्ता कारणले गर्दा घाउ आउँछ । केहीमा भने औषधिले गर्दा पनि मुखमा घाउ आउँछ ।
मुखमा घाउ यी कारणले आउन सक्छन्:-
-यदि तपाइको मुखमा घाउ छ भने त्यस्तो अवास्थ्य चिल्लो र पिरो खान कम गर्नुपर्छ l
-कुनै व्यक्तिको मुखमा घाउ भएमा त्यस्ता व्यक्तिले पानी तथा झोलीय पदार्थ बढी मात्रामा पिउनुपर्छ ।
-दिनहुँ जसो मनतातो नुनपानीले बारम्बार कुल्ला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
-मुखमा घाउ भएको ठाउँमा मह लपक्कसँग लगाउने जसले गर्दा उक्त घाउमा राहत मिल्दछ l
-नियमित रूपमा बदाम भिजाएर खाने गर्नुपर्छ l
-मुखमा घाउ आएको बेला हरियो सागपात तथा फलफुलहरू मजाले चपाएर खानुपर्दछ l जसले गर्दा घाउ निको बनाउन मदत गर्दछ l एजेन्सीको सहयोगमा